7 Best Tuneup lagu bedelan karo in ay ka qiimo Isku day ah
Waxaan si buuxda u duubay da'da digital marka ay timaado music, iyo kumbiyuutarada, kiniiniga, smart-telefoonada iyo ciyaartoyda warbaahinta dhijitaalka ah waa caadi ahaan ka buuxaan kuwan raadkaygay audio digital. TuneUp waa barnaamij uu soo marayo aad idil ururinta music digital oo si toos ah wuxuu diyaariyaa songs mislabelled, ku darayaa maqan cover tahay oo Fayda kuwan raadkaygay labalaabka. Waxay u egtahay weyn - marka laga reebo TuneUp aan lacag la'aan ah, ayaa haatan iibinaya ee $ 40. Halkan waxaan idin siin doonaa 7 kale oo TuneUp ka jaban inay is barbar dhigaan.
TidyMyMusic si sax ah iyo si toos ah u aragto iyo ku daro magaca artist, magaca song ee, farshaxanka album, info ku sifayn, lyrics iyo aad u badan, caawinaya in aad aad ururinta dhamaystiran oo abaabulan. Waa maxay dheeraad ah, software tani waa mid xaqiiqdii fudud oo dareen leh, xitaa inuusan ahaan u isticmaali karaa iyada oo aan wax dhibaato ah.
MusicBrainz Picard waa utility weyn u yar in ay taageertaa qaabab faylka ugu audio, wuxuuna ka shaqeeyaa Windows, Mac iyo Linux siday ugu qoran tahay in lagu tukan jiray af multi-madal. Codsigan si toos ah Kurigayga ururinta music aad iyo hubiyaa file kasta si sax ah tagged. Waxaa kaloo jira dhowr plugins dheeraad ah waxaad kala soo bixi kartaa in la sameeyo xitaa MusicBrainz Picard kale oo muhiim ah.
EasyTAG waa mid kale utility furan-il oo aad isticmaali karto si aad u eegto, edit iyo qori tags noocyada ugu badan ee files, oo ay ku jiraan MP3, MP4, OGG iyo files FLAC. Waxaa isku xira labada servers Freedb.org iyo Gnudb.org si loo hubiyo in macluumaadka tag track waa sax, iyo xataa turjumi karaan luqadaha aan Ingiriisiga ahayn.
TagScanner waa codsi badan hawlaha aad isticmaali kartaa abaabulka iyo maaraynta ururinta music aad. Waxaa si toos ah u xiriirsan doona database-online sida Freedb.org, Amazon iyo Discogs soo bixi cover tahay, oo aad abuuri karaan playlists oo aad markaas edit karaa iyo dhoofinta in HTML ama Excel. Miyuu ay ciyaaryahanka u gaar dhisay-in aad.
5. Tag & Magaca
Tag & Magaca sheegtay in codsiga ugu ballaaran digital file maqal ah tagging heli karo, iyada oo taageero u MP3, wmv, M4A, OGG iyo FLAC files oo badan, dad badan oo dheeraad ah. Barnaamijka waxaa si toos ah u hagaajin doonaa oo dhamaystiran file tags, horyaal load iyo cover tahay, iyo in la garto oo ay curiyaan macluumaadka album. Waxa kale oo aad turjumi karaa toddoba luuqadood oo kala duwan.
Jaikoz waa codsi tagging waa weyn ee files music tiro-tagging. Waxa uu isticmaalaa dhigma faraha loomana baahno iyo metadata si uu u eego warbixin track ka database macluumaad track MusicBrainz, Discogs iyo Acoustid. Waxa kale oo ay si toos ah u eegi doonaa ilaa iyo yeelaan farshaxanka album iyo ugaadhsan baxay kuwan raadkaygay labalaabka.
CopyTrans TuneTastic yahay barnaamijka aad u haddii aad u isticmaali Lugood loo abaabulo oo loo sii wado maktabad music aad, sidii aad ku bixisaa dabacsanaanta heshiis weyn ka badan iyo fursado badan oo isticmaalaya Lugood keliya. Waxaa loo aqoonsado doonaa albums in ay yihiin kuwan raadkaygay maqan, waxay leeyihiin kuwan raadkaygay nuqul ama in la la'yahay farshaxanka - oo dhan si toos ah ugu samayn click ee badhan.
> Resource > Beddelaan > 7 lagu bedelan karo TuneUp Best